I ▷ Freimatic Diet Fryer ▷ Fikradaha iyo Qiimaha ugu Fiican
Cuntada Freimatic Fryer
Shiilan qoto dheer ayaa ah mid ka mid ah qalabka aadka loo isticmaalo dhowr sano hadda. Xawaaraha iyo kala duwanaanshiyaha marka loo eego noocyada kala duwan ee cuntooyinka ay kari karto, waxa ay ka dhigaan qalab aan looga maarmin jikadeena.
Cecotec Cecofry Fryers
Inkasta oo dufanka xad-dhaafka ah uu waxyeello u leeyahay jirkeena, Haddii aadan rabin inaad iska dayso faa'iidooyinka qalabkan, laakiin aad rabto cunto caafimaad leh, waxaad dooran kartaa qaboojiyaha kulul sida Freimatic-ka aan maanta dib u eegnay.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa waxa qalabkani bixiyo, waa maxay faa'iidooyinkeeda iyo faa'iidooyinkeeda, fikradaha qaar ka mid ah isticmaalayaasha kuwaas oo horey u isticmaalay iyo halka laga helayo qiimo wanaagsan.
Fiiri Bixinta La heli karo
➤ Qiimaha Fryer Cunto Freimatic
➤ Dib u eegisyada Fryer Deep Freimatic
➤ Iibso Fryer Cunto Freimatic ah
Halkan waxaan ku tusinaynaa qaar ka mid ah sifooyinka uu qaabkani leeyahay si aad u go'aansato inay mudan tahay iibsashada.
▷ 5 litir
Qaabkani wuxuu leeyahay baaldi mug leh oo 5-litir ah oo laga yaabo inuu u ekaado wax badan, laakiin runtii wuxuu kuu ogolaanayaa inaad diyaariso saddex ilaa afar qaybood oo cunto ah.
▷ 1000 Watts oo Awood ah
Awoodda qalabka noocan oo kale ah waxay la xiriirtaa kala duwanaanta heerkulka ay gaari karaan. Xaaladdan oo kale ayaa ina soo food saartay awood xoogaa hooseysa marka loo eego tartanka, taas oo cunto karinta ka dhigaysa mid gaabis ah.
Awooddani waxay u ogolaanaysaa in ay gaadho heer kulka ugu badnaan 250 darajo Celsius. Si loo hagaajiyo heerkulka shuruudaha cunto karinta kasta, waxay leedahay heerkulbeeg analooga ah.
Jikada dhexdeeda, waxaa ka mid ah waqtiyada ugu caajiska badan oo la dhaqo weelasha iyo dheryihii loo isticmaali jiray karinta. Fryer-ka Freimatic 5 litir waxaad ku badbaadin kartaa waqti qaali ahsida saxanka iyo agabka kale lagu dhaqi karo makiinada weelka lagu dhaqo.
Intaa waxaa dheer, maadaama ay ku shaqeyso saliid aad u yar oo ay leedahay dabool. Waxay soo saartaa ur ka yar kuwa caadiga ah mana ku sayfto miiska jikada.
Xaaladdan oo kale, shiileeyaha wuxuu ku daraa a saacad otomaatig ah oo la dejin karo ilaa 90 daqiiqo, Habkan waxaad ku karin kartaa dhammaan noocyada cuntada iyadoon loo eegin xilliga karinta ee ay u baahan yihiin.
Fryer-ka Frymatic Diet wuxuu leeyahay baaquli dhoobo ah oo weyn oo aan dheg lahayn, kaas oo u ogolaanaya in cuntadu aanay ku dheggan. Waxay leedahay dabool sare halkaas oo saacadeeyaha iyo heerkulbeegga la geliyo gacan iyo a quraarad hufan oo noo ogolaanaysa inaan la socono cuntooyinkayaga inta lagu jiro isticmaalka. Halkaas waxaa ku yaal laba tilmaame oo iftiin ah oo kuu oggolaanaya inaad la socoto habka karinta.
Waxay leedahay dhammayn casri ah halkaas oo midabka madow uu u badan yahay, inkastoo aad bay u weyn tahay xagga sare.
Cabirrada: 20 x 15 x 10 cm
Miisaanka: 4.68 Kiilo
Fryerku wuxuu leeyahay 24 bilood oo dammaanad ah si uu u dalbado cilladaha wax soo saarka.
Qiimaha sidoo kale waa muhiim, maadaama ay tahay inaad doorato moodal ku habboon miisaaniyaddaada. Fryers of brand this waa inta u dhaxaysa 45 iyo 50 euros qiyaastii iyo Waxaad ka arki kartaa qiimaha saxda ah ee hadda jira badhankan.
Waxaa laga yaabaa inay ku xiisayso: Shiilanyada Saliidda Cecotec ee Xorta ah
Isticmaalka tamarta yar, marka loo eego shiilan dhaqameed.
SHAQO CUSUB IYO SHAQO DUBAD. 2 in 1
taangi dhoobada ka-horjeeda. Cuntadu kuma dhegto.
1000 watts oo awood ah iyo heer kul la hagaajin karo ilaa 250º
SHAQADA ISTICMAALKA AAN LA FAAHFAAHIN. Ku kari ilaa 180 daqiiqo
Qalabka ayaa ah walxo in la tixgeliyo marka la dooranayo nooc fryer gaar ah oo kiiskan Freimatic waxaa ka mid ah, marka lagu daro baaldiga:
Saldhigga Dahaarka Silikoon
Buuga cunto karinta oo leh dhowr suxuun oo la diyaariyo: Fiiri buug-gacmeedka
Fryer-ka Freimatic Diet Fryer wuxuu ka kooban yahay laba hawlood oo waaweyn: shiil iyo dubista. Waxay ku shaqeysaa hawo kulul oo xoog badan taasoo u karisa cuntada si ka caafimaad badan, maadaama ay u baahan tahay saliid aad u yar.
Haddii aad rabto inaad ogaato faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan hawlaheeda iyo sida loo isticmaalo, waxaad daawan kartaa muuqaalka soo socda.
Ma jiraan fikrado aad u badan oo ku saabsan qaabkan iyo in runta loo sheego, qiimeyntu way ka xun tahay kuwa kale ee tartanka saliidda aan saliidda lahayn. Taasi waa sababta aan kugula talineyno inaad aragto miiska oo leh waxyaabo kale oo aan u aragno doorashada ugu fiican.
Waa badeecad sax ah in cuntadaada lagu shiilo saliid yar. Waxay ku habboon tahay kuwa jecel cuntada caafimaadka leh, maadaama ay ku beddesho shiilan caadiga ah habka la midka ah dubista. Si kastaba ha ahaatee, waa nooc suuqa ku jiray muddo sanado ah waxaana lagu hagaajiyay moodallo ka hufan.
Cuntooyinka ka caafimaad badan
Qaab duug ah
Waa inaad walaaqdaa cuntada
Tilmaamaha aasaasiga ah
▷ Beddelka lagu taliyay
Haddii aadan ku qancin alaabtan, waxaan kuu soo jeedinaynaa kuwa kale fursadaha la mid ah kuwaas oo hubaal ka mid ah waxaad ka heli doontaa waxa aad raadinayso.
Haddii aad u malaynayso inay ku faa'iidaysan karto jikadaada online waxaad ka iibsan kartaa qiimaha ugu fiican:
(Codadka: 8 Celcelis: 4.1)
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » Cuntada Freimatic Fryer
6 faallooyin ku saabsan "Fryer Cuntada Xorta ah"
22 / 07 / 2019 at 11: 20
Halkeen ka heli karaa dambiisha Frei matic?
23 / 12 / 2019 at 14: 22
Xagee ka heli karaa buuga cuntada lagu kariyo ee la socda shiilan?
23 / 12 / 2019 at 14: 34
Hello. Waxaan ku darnay qaybta qalabka. Waxaad ku arki kartaa adigoo gujinaya buug-gacmeedka. salaan
04 / 05 / 2020 at 20: 52
Hello. Waxaan lahaa frei matic dhowr sano oo ay xumaatay.
Mar haddii weelku ka samaysan yahay dhoobada, ma loo isticmaali karaa dheri ahaan weelka dhoobada?
06 / 05 / 2020 at 15: 48
Jawaab adag tan iyo markii ay hawsheeda caadiga ah si toos ah ula xiriiri maayo isha kulaylka. Waxay u badan tahay inay shaqayn doonto laakiin waxaa jirta suurtogalnimada inay qalloocdo. salaan
15 / 02 / 2022 at 12: 39
Aad ayaan u isticmaalaa shiilan qoto dheer oo aan ku faraxsanahay ilaa hadda. Iska caabinta Freimatic Claudia waa jabay. Makiinada iyo dambiishu waxay ku sugan yihiin xaalad fiican, laakiin markii aan isku dayay inaan la xiriiro adeegga kaalmada farsamada, waxaan ogaaday in nambarka taleefanka iyo cinwaanka iimaylka ee ka muuqda buug-tilmaameedka midna uusan shaqeynin. Miyayna jirin hab lagu dayactiro ama lagu iibsado dabool cusub?